Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamusha server indasitiri cheni iri kuumbwa zvishoma nezvishoma - Goldenor Electronic Technology Co, Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamhepo server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma
Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamhepo server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma
yekutsvagisa institution iri pasi pe Ministry of Industry and Information Technology yeChina yakaburitsa gwaro jena musi wa3. Yakaratidza kuti nerutsigiro rweyakavhurika OpenPOWER tekinoroji, zvishoma nezvishoma yakagadzira kushomeka kweakakosha matekinoroji emaseva epamba. Iyo epamba server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma uye ichinyatsoitika Kuzvimiririra uye kudzora.
Simba mapurosesa ane hunhu hweakakwira mashandiro uye kugadzikana kwepamusoro, uye anoshandiswa zvakanyanya mumisimboti netiweki senge mabhangi uye nharembozha. Iyo inoshandisa yakarongedzwa kuraira seti, ine yakakwira komputa kugona uye kudzikama pane x86 maseva, uye inomiririra yepamusoro-magumo maseva.
Iyo "China OpenPOWER Industrial Ecological Development White Paper" yakaburitswa neCCID Consulting, inzvimbo yekutsvagisa yakananga pasi peMinistry yeIndustry uye Information Technology yeChina Electronics Information Industry Development Research Institute pa3, chekutanga yakaongorora zano reChina renyika yekusimudzira IT tekinoroji. . Pasi pechirongwa che "Made in China 2025" uye "Internet +", zvinotsigirwa kuti China iri kuenda kubva kune huru nyika inogadzira ichienda kune yakasimba nyika inogadzira. Iko kubatanidzwa kweindasitiri uye kuisirwa ruzivo kunogona kuona shanduko uye kukwidziridzwa kweChina indasitiri yekugadzira uye kuwedzera iyo yakawedzera kukosha yezvigadzirwa zvekugadzira.
Iyo "White Pepa" yakaratidza kuti pasi pemamiriro azvino, chiyero chemusika weIT weChina urikuratidza kukura nekukurumidza, uye kutengeswa kwemaseva epamba kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma, uye mwero wakakura kwazvo wekukura unochengetedzwa. Kune rimwe divi, uku kukura kuri kukonzerwa neChinaâ € ™ s inowedzera ruzivo rwekuchengetedzwa kweruzivo, uye kune rimwe divi, zvinoratidza zvakare kuenderera mberi kwekuvandudzwa kweyekunze server tekinoroji. Vagadziri vevavhairi vepamusha vanoramba vachivandudza yavo server R&D kugona. Iyo mhando yemaseva anomiririrwa neHuawei, Inspur uye Lenovo yakavandudza zvakanyanya. .
Inotarisira mamiriro azvino apo mabhizinesi ane nzwisiso isina kujeka yezvinhu zve "rusununguko, chengetedzo uye kutonga", iyo "White Pepa" inotarisa kuongororwa kwakadzama kwenzira yebudiriro inorongwa ne "kuzvimirira, kuchengetedzeka uye kutonga". Iyo yakazvimiririra yekuvandudza nzira ndeimwe neumwe kubva kune yakazvimiririra kugadzirwa, yakazvimirira brand, yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira uye yakazvimiririra yehungwaru midziyo kodzero. Parizvino, China's server indasitiri ichiri mudanho rezvimiririra brand uye iri kusimukira yakazvimirira kutsvagisa nekusimudzira. Iyo inodzora budiriro nzira yakagadziriswa zvishoma nezvishoma kubva pakujeka, kuvhurika uye kugadzirisa patsva. Parizvino, kujekesa kwave kuwanikwa zvakanyanya, asi kuchine imwe gaka pakati pekuvhurika uye kugadzirisa patsva. Iyo yekuvandudza nzira yekuchengetedza inofanirwa kutarisisa kune system chengetedzo, network chengetedzo uye manejimendi chengetedzo. Sezvo manejimendi chengetedzo isina kugashira kutarisirwa kwakaringana pamberi, inofanirwa kubhadharwa kutariswa kwakanyanya.
Panguva yakakosha yekuvandudzwa kweindasitiri yeChina OpenPOWER, iyo "White Pepa paChina OpenPOWER Maindasitiri Ekuvandudza Kwezvinhu" yakaburitswa neCCID Consulting yakaongorora kukura kwezvisikwa kweOpenPOWER yekushandira pamwe kwakajeka zvichibva pakuongorora kwakadzama kwenzira yekusimudzira yeChina yakazvimirira, yakachengeteka uye inodzora. Iyo modhi uye chizvarwa chechipiri chekuparadzirwa komputa kwaunza mikana yakakosha yekusimudzira kukudziridzwa kweChina indasitiri yezvemagetsi, ichida kupa chirevo cheiyo modhi yekuvandudza uye kuita kukuru kuita sarudzo yenyika, nzvimbo nenzvimbo dzemabhizinesi.
Yapfuura:Server zero yekudyara mhinduro
Tevere:Nei sevha ichifanira kuiswa mukamuri yemakomputa?